Wabiga Shabeelle oo ku fatahay deegaanno ka mid ah gobolka Sh/dhexe “Dhageyso” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wabiga Shabeelle ayaa lagu soo waramayaa in uu ku fatahay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Jowhar.
Deegaannada Tuugaarreey iyo Maandheere oo hoos yimaada degmada Jowhar ayaa la sheegay in wabigu ku fatahay, iyadoo biyaha wabigu ay qarqiyeen dhul beereed ku yaala deegaannadaasi.
Waxaa laga cabsi qabaa in wabigu ku fataho deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe, waxaana hadda ka socda deegaannadaasi howlo baaxad leh oo looga hortagayo fatahaadda wabiga, howlahaasi waxaa iska kaashanaya maamulka iyo bulshada deegaannadaasi.
Fatahaaddan ayaa geysatay qasaare maaliyadeed iyadoo biyuhu ay mareen dalagyo u badnaa sisin iyo qudaar, waxaana sidoo kale ku dhintay tiro xoolo ah oo ay dhaqanayeen dadka deegaannadaasi ku nool, sida uu Radio Muqdisho u xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka Tuugaareey.